U-Elon Musk usomashishini omkhulu okanye i-DARPA yebhodi ye-transhumane ye-cyborg? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	5 Meyi 2017	• 16 Comments
Ngaba u-Elon Musk umntu onokwenza nantoni na, iqhawe elitsha, i-American Dream ishishini lomninimzi we21 okanye nje i-DARPA ibhodi ye-cyborg ehleliweyo? Ukuba ukhona jongene no dliwano, iqhubhisa iinkampani ngokukhawuleza kunokuba unako ukucima iitapile kwaye emva kweentlobo ezincinane (ukwenza ibakala liqiniseke) yonke into iyimpumelelo enkulu. Umntu osemva kwe-PayPal, iimoto zeTesla kunye neendawo ze-Space X ezihlaziyiweyo azifunanga kuphela ii-3D amanethiwekhi angaphantsi komhlaba ukuxazulula i-jams traffic; Kwakutsha nje uqalise inkampani ebizwa ngokuba yiNeuralink, ukuxhoma ingqondo yethu kwi-intanethi kwaye ngoku ifuna Satellites 4425 ukudubula emoyeni ukuze sibe ne-intanethi kwi-2020, ngaphandle kokuxhomekeke kuma-antenna nakwiinkcukacha ze-fiber optic. Wow! Okumangalisayo.
Maxa wambi ndimva ethetha kwaye ndifumana ingcinga yokuba sele sele ene-internet uxhumano nengqondo yakhe; into enjenge-movie i-Matrix, kodwa ingenangcingo. Oku kuzwakala kukuhlekisayo, kodwa yiloo nto afuna ukuyenza ishishini kunye neNeuralink yakhe nkampani. Kwaye isizathu kubonakala ukuba yena ngokukodwa impumelelo American Dream usomashishini frontman of DARPA kuba DARPA (emkhosini uphuhliso Iziko ntlanu) iminyaka zonke iintlobo zobugcisa ozibandakanye leyo eyenza abantu ilungele kuhlanganiso kunye Internet. I-DARPA imele i-Arhente yoPhando oluPhakamileyo. Eliziko lalingumsekeli we-intanethi kunye nomgaqo-nkqubo we-TCP / IP. Kodwa kwenzeka ngakumbi kwiDARPA kwaye isiko sisondele kakhulu kwiinkampani ezinkulu ezifana ne-Google ne-Facebook. Umfazi ophezulu waseDarpa Regina Dugan ayitshintshi kwiGoogle kuqala kwaye kwi-Facebook. Nabani othabatha inkathazo uya kubona ukuba yonke iteknoloji kunye neenkonzo ze-intanethi ezimangalisayo ezi zinikezela ngokukodwa zijolise ekuqokeleleni i-Big Data malunga noluntu. Ezi nkampani ziza kwazi ngokukhawuleza kumntu ngamnye ukuba intanethi yakhe yintanethi, ngubani ekuthetha naye, apho ehamba khona nendlela evakalelwa ngayo. Umva wokugqibela uvale 'phezu kwephezulu', kodwa akunjalo, ngenxa yakho zefowuni zokusebenza Ndakucela ukuba wamukele iimeko apho unikeza iinkampani ixesha elipheleleyo ukufikelela kuzo zonke iisensi kwifowuni yakho kwaye unokuzihlola nokuhlalutya i-24 × 7. Zonke iinkampani ezenziwa nguRegina Dugan, zingathanda ukudibanisa nengqondo yakho kwixesha elizayo. Oku kulungile, kuba ngoko uya kufumana amaninzi amathuba angaphezulu. U-Elon Musk uphinde wabandakanyeka kule nto. Abafana abaninzi bafuna into efanayo: ingqondo yakho kwi-intanethi. Enyanisweni, ungatsho nje ukuba u-Elon Musk kuphela, kodwa zonke iinkampani eziphumelelayo ezifana ne-Google kunye ne-Facebook zikhonza i-ajenda yenkampani yezobugcisa. Yiyo ajenda ye-transhumanism, njengoko ichazwe kuyo eli nqaku.
I-DARPA isebenza kuphuhliso oluguqula i-Matrix ukusuka yesayensi in inyaniso yesayensi. Ku malunga nenkqubo ebizwa ngokuba yi-TNT. Akunjalo i-TNT (nangona igalelo liza kuba yinto engqondweni), kodwa uqeqesho olujoliswe kwi-Neuroplasticity Training. Kubonakala ngathi ingqondo ayikho "i-biocomputer" ye static, kodwa kubonakala ngathi i-receptors engqondweni yakho inokukhula okanye iphule ngamandla (jonga apha). Ngenxa yoko mhlawumbi igama elithi 'neuroplasticity'. Ngoko ukuba ufuna ukwenza oko uElon Musk afuna ukukwenza ngeNeuralink yakhe (ukudibanisa ingqondo yakho kwi-intanethi), ngoko kuyisinyathelo esinengqiqo ukuba kufuneka uthabathele le 'neuroplasticity' kwingqalelo kuloo phuhliso. Ukuba ulanda ulwazi olusuka kwifu leGoogle ngqo kwingqondo yakho kwixesha elizayo, oku kuya kubangela ukutshintsha kwetoni yeeseli zakho zobuchopho. Ngoko ke yonke into ephakamileyo yeplastiki kwilo gumbi eliphezulu. I-DARPA ifumene ukuba le plastiki ingatshintshwa kwaye isetyenziselwe iinkqubo zokufunda ngokukhawuleza. Oku kugqiba i-TNT. Abantu bafuna ukufunda ukuqonda ukuba i-plasticity phambi koqeqesho. Funda konke malunga nale Website yeDAPRA. Kuzo zonke iindawo ezisetyenziselwa ukuphakamisa abantu kwi-intanethi. Inkqubo yaba ngo-Matshi 2016 iqaliswe kwaye ngoku iya kuhlola izifundo kwi-Army yase-US, kuquka nabakhohlisi.
Uthungelwano okubambelela of kwimithambo yoluvo odibanisa luvo kwi ingqondo umnqonqo kunye namaziko, ulusu, kunye nezihlunu, nto leyo a host ekulawuleni imisebenzi zebhayoloji digestive ukuba uza ukuqhutywa. Inkqubo yesistim yomnxeba unokwenza okungaphezulu koko. Yingakho i-DARPA sele iqhuba iiprogram zokuphanda ukusebenzisa le mininzi yemisebenzi. Olu nyango esikhundleni ukuba ukunyanga izifo kunye, umzekelo, ukukhawulezisa impiliso, kodwa ukulawula aphilise kuyabuya oyivileyo kubasebenzisi bayo phambili izitho zokufakelwa. Ngoku DARPA utyhala imida kwaye ngoku ufuna ukusebenzisa imizwa peripheral lomzimba ukuphumeza into yayigqalwa elide domain kuphela ubuchopho: ngokuququzelela inkqubo yokufunda. Umzamo ubeka ingcamango eqhelekileyo yokuba ingqondo ixelela inkqubo yentsholongwane yendlela yokwenza ntoni, ukuhlaselwa. Inkqubo entsha, ekuJoliswe Uqeqesho INeuroplasticity (TNT), lijolise ekwandiseni isantya kunye nokusebenza izakhono zokufunda kwengqondo, ukusebenza ngqo kwimithambo yoluvo ezinokuthi ukukhuthaza ubuchopho kuqhagamshelwano ithuba neuronal nokuqinisa. TNT iya kubonelela iteknoloji iqonga ukuphucula ukufunda loluhlu olubanzi izakhono zokuqonda, ukwenzela ukunciphisa ixesha kunye iindleko zoqeqesho kunye nendleko abasebenzi zoqeqesho lezoKhuselo, ngelixa iziphumo iyaphuculwa. Ukuba uphumelele, i-TNT inokukhawulezisa ukufunda nokunciphisa ixesha elifunekayo lokuqeqesha iingcali zelwimi lwangaphandle, abahlalutyi beengqondo, abakhweli be-cryptographer nabanye. Le nkqubo kwakhona ephawulekayo kuba, ngokungafaniyo ezininzi imigudu zangaphambili luvo kunye neuro-uzobe olwenziwe ngocoselelo DARPA, akukho kuphela kwi ukubuyisela umsebenzi ezilahlekileyo ejoliswe, kodwa ukukhuthaza amathuba ngaphaya kwezinga eziqhelekileyo. "Ndiyazi i-Kung Fu!"
Ukuba sithelekisa konke oku kuphuhliso lwezobuchwepheshe, uza kufikelela kwisigqibo sokuba i-intanethi yolwazi olumnandi kunye nemithombo yonxibelelwano iya ngokunyuka ukutshintsha Ikhonkco yekhoboka yobugqirha yobugqirha. Ngokukhawuleza uElon must uye imisiwe Hewana ezulwini, awukwazi kuzimela emahlathini zaseSiberia. I Neuralink uqhagamshelo ingqondo isoloko kwaye yonke idityaniswe iingcamango Internet ngokoqobo okanye mazwe akhiwe elinokuboniswa ngqo kwi ingqondo yakho, leyo ayinyani nangeyonyani zizinto yinto enzima omnye komnye. Buckle yakho ibhottti, Dorothy, kuba i-kansas iyahamba, I-Cipher yayiza kuthetha kwi-movie i-Matrix. Phakathi kwabanye eli nqaku Ndacacisa indlela imeko apho iDARPA (ngokubambisana neenkampani ezifana neGoogle, Facebook, iinkampani zika-Elon Musk nabanye) zisebenza, mhlawumbi sele zikhona. Amathuba kukuba sele siphila ngohlobo lwenyaniso ebonakalayo. Oku kuvakala kakhulu kumagama, kodwa ndikucebisa ukuba ufunde eli nqaku (kwaye ubukele iividiyo). Xa i-DARPA kunye neenkampani ezineeteknoloji zamkelwa ngokuzithandela ngabantu ngokusetyenziswa kwee-smartphone, iindaba zoluntu kunye nejejethi, ukwakha i-matrix ngaphakathi kwe-matrix ekhoyo. Umphefumlo wokuqala kufuneka ususwe kwi-awareness / origin. Yisikhathi sokufumanisa ukuba ingozi ilele kwaye i-matrix esiphila kuyo ayikho into engaphezulu kwintolongo yomphefumlo ekuthintela amandla ethu okudala. I-matrix ekwakhiwa yi-DARPA kunye kunye kufuneka iqine uphawu lomsebenzi webhethri. Ixesha lokukhupha!
Uludwe lwekhonkco lovimba: telegraaf.nl, darpa.mil, darpa.mil
Ukulinganisa okungenasiphelo kwemizwa yakho nge-smartphones kwenza ubunjineli bentlalo lusebenze ngakumbi
tags: cyborg, darpa, uElon Musk, Facebook, eziziimbalasane, uphando, ray kurzweil, Regina Dugan, transhumanism
5 Meyi 2017 kwi-13: 06
Inqaku elinomdla kakhulu malunga noMusk
Kwakhona amanye amanqaku acingisisa ngokwenene, afaneleka ukufunda.
5 Meyi 2017 kwi-16: 39
Umbhali uthabatha amagama emlonyeni wam. Abaqeqeshiweyo MK guys Ultra ezifana must, Zuckerberg kunye nabantu umculo umboniso mveliso amaqhawe kunokukhokelela kuthi nzulu isizalo usebenzisa umfanekiso ezintle uyayigubungela-ajenda emnyama
5 Meyi 2017 kwi-17: 09
Khangela ezi ziqingqiweyo zeCGI imifanekiso ye-landing ye-Falcon 9. Kutheni kungekho audio / ividiyo kufuphi ne-platforming landing, ingenzeka ngokwenene?
Yinto enkulu enkulu:
6 Meyi 2017 kwi-16: 05
@aurora0026, wow, inqaku elihle lomntu.
Ngalesi nqaku, kunye nazo zonke iintlobo zenkcazelo enomdla, andinayo nayiphi na into yokuba uMusk, njengo-Hawking, iyonke ye-BS. Kwaye kukho konke ukukhangela kwamanani engakaze ndiwajonge. Ndiya kujonga ngaphezulu kweMathematika. I-Smart guy, kwaye ebaluleke ngakumbi, unyanisekileyo xa undibuza.
Ndabona kwakhona enye yesiteshi sakhe se-youtube.
6 Meyi 2017 kwi-19: 50
Ewe ngokuba Hawking njengokuba 'etyeni ukuba worden.Alleen Isibakala ukuba uhlobo ALS yabonakala ku 1963 / 64 yaye kamva phantse 55 iminyaka kusekho ngobubele yobomi inika denken.Rondrijdend nge screen Intel enkulu ingemva kwam, ke zonke iindlebe ze-alarm zikhala.
Ngubani othetha u-Hawking okanye Intel ???? ?
7 Meyi 2017 kwi-03: 10
Amanye amanqaku angaphinda afundwe apha: http://mileswmathis.com/updates.html
5 Meyi 2017 kwi-16: 06
IWWIII sele ixakekile emehlweni am, imfazwe engapheliyo nomphefumlo wakho kunye nokuqonda. Uninzi luphazamiseka ngesonka kunye nemidlalo ... okanye uphuhliso lwezepolitiki lobuxoki. Izibonakaliso zikhohlisayo, sele ziqhubekile kwaye zikwinqanaba eliphambili
5 Meyi 2017 kwi-16: 27
Villmark wabhala wathi:
5 Meyi 2017 kwi-20: 16
Ndiya kutshitshiswa ngokukhawuleza kwintsebenziswano ngokubhekiselele kwizinto eziphathekayo, ngoku ngoku ndiyazi oko kwiminyaka embalwa ngoku, ndiyibona yonke indawo. Inetha ivala, ngokukhawuleza nangokukhawuleza.
Ndiyazibuza ukuba uthetha ntoni 'ngamandla ethu okudala ubomi.' Ngaba ufunde apha nantoni into ethile malunga nayo, kodwa inkcazo ihlala ilula.
6 Meyi 2017 kwi-03: 59
I-MK Ultra, i-Hollywood kunye neNtsha yobuqhetseba:
9 Meyi 2017 kwi-05: 30
Ingozi yangempela ayibonakali ... ukuphathwa kwe-electro magnetic. WiFi, 4G / 5G njl. Nge-ELF emfutshane
9 Meyi 2017 kwi-05: 34
Ukuphathwa kwamandla ombane kude okanye iinkqubo zesantya
Inombolo ye-Patent: 6238333
Abstract: I-Apparatus kunye neendlela zokusetyenziswa ngokude okanye iinkqubo zeentlanzi nge-magnetic field of magnet bar magnet. Ukuxhomekeka kwindlela yokumodareyitha yeepatikhi zentshukumo ye-nerve receptors, kunye nokuxhatshazwa kweendlela ze-circuits ezithile, kuvumela ukusetyenziswa kwezinto ezinobuthakathaka kakhulu. Oku, kunye namaxesha amakhulu amakhulu angagqitywa nge-magnet ye-bar enesigxina, yenza kube lula ukusebenzisa inkqubo ye-nervous away kumgama wamanqaku angamakhulu ambalwa, usebenzisa i-device encinci ephathekayo ebhetri. Le ndlela ingasetyenziselwa ukuthotyelwa komthetho kwiimeko zokumisa.
Ufakwe: Agasti 10, 1999
Umhla woLungelo lobunikazi: Mhlawumbi 29, 2001
Umngenisi: Hendricus G. Loos
6 Meyi 2017 kwi-21: 58
Inkqubo yeshishini lemikhosi kunye noko kusebenza kuyo. Isiteshi se-YT yoLwazi lwe-Air Force Research Laboratory
UDkt Kathleen Carley, uMlawuli we-Centre for azo Analysis of Social kunye Systems kweSebe kwi Carnegie Mellon University, ithetha uphando iqela lakhe ezisisiseko ngaphakathi kummandla nokumodela Behaviour azo, ogxininisa ekuqondeni thina ababandezeli bethu silindele nokuqonda iipatheni zokuziphatha. Ukusebenzisa isayensi ye-computer kunye nenzululwazi yoluntu, olu hlalutyo lisebenzisa idatha yehlabathi yangempela abantu abakhuphayo ukuxela ukuziphatha kwabo. UDkt UCarley ugxininisa ukuba uphando olusisiseko luyintloko ekuphenduleni imibuzo yethu ngomso.
6 Meyi 2017 kwi-22: 02
Uqeqesho lweCore Technical (CTC)
Kukho abane abanekhono lobugcisa kwiziko lophando nophuhliso kwiCandelo loLawulo. Kwimimandla nganye, iCandelo leeCandelo labasebenzi beklasi, izixhobo kunye nezibonelelo ezibonelela
ilawulwa amandla okulwa nomkhosi wokulwa.
· Amandla ama-Microwaves aphezulu asebenza ngekhompyutha, akhusele impahla kunye nokukhusela abahlukumezi
iteknoloji engapheliyo. Amagunya okubandakanya aquka: Amandla aPulsed, iRF Frequency frequency, iRF Frequency frequency, kunye nePlasma
· AmaLasers anika ukuchaneka ngeendlela ezinokubakho kwixesha elide kwisantya sokukhanya. Izibonelelo ziquka: i-Laser yeGesi kunye neCommer, i Laser State State Lasers, i-Laser Fiber kunye neLasiconductor Lasers
· Ukulawula i-Beam kusasaza iipilisi ze-laser eziphezulu kwi-moya ekujoliswe kuyo kwaye zenza izinto zokucinga eziphambili kwi-space. Icandelo
ubuchule bubandakanya: Ukusasazwa kwe-Atmospheric, i-Adaptive Optics, ukuFumana, ukuThengisa, ukuPhonononga,
kunye neNkcazo yokwazisa isimo
· Iimpembelelo, ukuModeling kunye nokuLungisa kufana nokuqinisekisa ukuphuhliswa kwetheknoloji ukuqinisekisa
ukufezekiswa kweziphumo ezifunwayo. Izibonelelo zibandakanya: iiNkqubo, uMsebenzi, uMandla oLawulo
Imiphumo, kwaye iqondise i-Energy Physics Modeling
Isimboli seCube, khangela logo? ???
kwaye nge-wiki oku kulandelayo:
ICandelo loLawulo lwezithuthi
Unxibelelwano / iNkqubo yokuPhumela iNkqubo yokuHlalwa kweNkqubo (C / NOFS)
Injongo Space Izithuthi Directorate ukuphuhlisa kunye nendawo lotshintsho nobuchwepheshe ngempumelelo ngakumbi, lamaphulo warfighter ifikeleleke ngakumbi.  ukongeza kwiCandelo Ikomkhulu yaseKirtland AFB, New Mexico kunye kwiziko ezongezelelweyo uphando kwi Hanscom AFB, Massachusetts, i high Frequency Inkqubo esebenzayo Auroral Research (HAARP) ibekwe kufuphi Gakona, Alaska na ook esetyenziswa kudityenwe Space Izithuthi Directorate kwakunye DARPA, i-Ofisi Naval Research (ONR), Naval Research Laboratory (NRL) kunye neeyunivesithi ukuba aqhube Ionospheric Research .
6 Meyi 2017 kwi-22: 41
6 Meyi 2017 kwi-22: 42
CNN kwi 1985
« UMnu Isithandwa sikaSmith kunye nobutshabalalo ngokukhawuleza xa bejongene 'neengcinga ezahlukeneyo'
UMartijn van Staveren inkwenkwezi ekhulayo eNetherlands yokomoya? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 2.886